Arsenal iyo Manchester City way badiyeen - BBC Somali
Arsenal iyo Manchester City way badiyeen
21 Febraayo 2015
Image caption Kooxaha Swansea iyo Manchester United
Galabta waxaa dhacay kulammo kale oo xiisa badan oo ka tirsan horyaalka kubbadda cagta Ingiriiska.
Tan ugu daran waxay ku dhacday Manchester United oo markii 2aad sanadkan ay ka badisay kooxda Swansea.
Manchester United oo tartankan si xun ku bilawday kaddib markii ciyaartii ugu horreysay ee tartanka horyaalku uu bilawday ay Swansea ka badisay, waxaa la moodayay inay muddooyinkan dambe soo xoogeysanayso laakiin Swansea ayaa mar kale guuldarro qaraar dhadhensiisay. Waxayna hadda hoos ugu soo dhacday kaalinta 4aad.
Kooxda Chelsea oo tartanka hoggaaminaysa waxaa sigtay kooxda Burnley oo ka mid ah saddexda kooxood ee ugu hooseeya dhinaca dhibcaha kana baqaya in hoos loo rido sanadkan. Ciyaartan oo ku dhammaatay barbardhac 1-1 gool ah waxaa intii hore gacan sarreysay Chelsea oo fursado badan iska khasaarisay hase ahaatee waxay xaaladdu ku xumaatay markii laga saaray laacibka Nemanja Matic oo dhexda u hayay kaddib markii uu ku xanaaqay ciyaartoy ka tirsan Burnley oo si xun u jallaafay hase ahaatee aanu garsooruhu arag.
Daqiiqadihii dambe ee ciyaarta dhowr jeer ayaa la sigay Chelsea hase ahaatee Burnley uma suurta gelin inay ka faa'iidaysato laacibka Chelsea laga saaray.
Waxaa Sabtidan faa'iiday kooxaha Arsenal oo 2-1 uga badisay Crystal Palace sidaasna kaalinta 3aad ku soo gashay iyo Manchester City oo soo gaabisay farqiga u dhexeeya iyaga iyo Chelsea oo hadda ah shan dhibcood oo keliya.
Natiijooyinka kulammadii Sabtidan oo dhan waa kuwan:
Manchester City oo la ciyaareysa Newcastle way socotaa ciyaartoodu, waxaana 3-0 ku hoggaaminaysa Manchester City qaybta hore ee ciyaarta.